SIPEM BANQUE : Miitatra ny tolotra ho an’ny mpanjifa | Madatopinfo
Niorina tamin’ny taona 1990 ny Sipem Banque fa ny volana Desambra 2014 no nahazo fankatoavana hiasa afaka manome tolotra sahaza ho an’ny rehetra. Raha ny teo aloha, nijanona ho orinasa mpampindrana sy fanangonam-bola ny Sipem Banque fa amin’izao fotoana izao kosa nisy ny fiovana goavana : fampisamboram-bola ny mpiasam-panjakana na ny tsy miankina, tsy misy antoka fa alefa amin’ny alalan’ny banky ny karama. Efa andron’ny fanatontoloana izao, ary tsy afa-misaraka amin’ny fivoarana ara-teknolojia ka nasiana ny « internet banking ».
« Ny mampisongadina ny Sipem Banque amin’ireo banky 11 misy eto Madagasikara dia noho izy orinasa tantanan’ny Malagasy, ny mpikambana ao anatin’ny filankevi-pitantanana ihany koa dia Malagasy amin’ny ankapobeny. Maro ny mpanjifa ao amin’ity orinasa ity amin’izao fotoana, eo ny mpandraharaha, eo ihany koa ny olo-tsotra. Ankoatra izay, azo ao anatin’ny fotoana fohy ny valinteny ary manampy amin’ny fikasana samihafa toy ny mariazy sy ny fidiran’ny mpianatra ihany ny koa ny Sipem Banque », hoy ny Tale Jeneraly Brillant Rakotoarison. Araka ny fanampim-baovao hatrany, manodidina ny 55.000.000.000 Ariary eo ny vola miodina ao amin’ny Sipem Banque.
Ity banky ity ihany manome asa mihoatra ny 50 isan-taona, ary miisa 20 ny masoivoho manerana an’i Madagasikara ka ny 8 amin’ireo dia eto Antananarivo avokoa, noho izy be mponina sy toe-karena miodina be indrindra. Banky manakaiky sy manome fahafaha-po ho an’ny mpanjifa hatrany ny Sipem Banque amin’ny alalan’ireo tolotra marobe hafa noho ny rehetra.